खानेकुरा फाल्ने गर्नु भएको छ ? नगर्नुस् त्यस्तो गल्ती – Khabarhouse
खानेकुरा फाल्ने गर्नु भएको छ ? नगर्नुस् त्यस्तो गल्ती
Khabar house | २४ पुष २०७६, बिहीबार ०६:१५ | Comments
काठमाडौं : खाना बाच्नका लागि खाइन्छ, शोख पुरा गर्न होइन। तर आजकल खाना भोकसंग भन्दा पनि शोख पुरा गर्ने माध्यम बनेको छ। नेपाल भोकमरी देशको सूचीमा नपरे पनि हजारौ नेपालीहरु दैनिक भोकै सुत्न बाध्य छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु मात्र होइन, खानाको अभावमा मानिसहरु भोकै हुने गरेका छन् ।
जसको कारण तयारी खाना धेरै भएर त्यसको नष्ट हुनु वा फ्याकिनु हो । बिभिन्न भोजभत्तेर वा दैनिक रुपमा हामीले घरमा पकाएको खानाको बचत गर्न नसक्दा नखाएको खाना नष्ट भएर जाने गर्दछ। तर हामीले फ्याकिएर नष्ट हुने खाना बचाउन सक्यौ भने त्यसले हामी स्वयम्लाई आर्थिक लाभ गर्ने त छदै छ, अरु ब्यक्तिको समेत खाना खोसिदैन । आखिर खाना फ्याकिनबाट कसरी बचाउने त ?
खाना बचाउने १० उपाय : एकै साथ धेरै मात्रामा खाद्य सामाग्री नकिन्नुहोस् । खाना बनाउनु अघि कसले कति खाने हो, सोधेर बनाउनु होस् । यदि खाना उब्रिएको छ भने त्यसलाई उपयोग गर्ने अवस्थासम्म प्रयोग गर्नुहोस। खाना ठिक्क वा बरु कम कम खाने बानी बसाउनुहोस् । अपच हुने गरी नखानुहोस् । खाना बनाउनु अघि बचेको खाना छ भने त्यसलाई अड्कलेर मात्र अर्काे खाना बनाउनुहोस् ।
जहिले पनि खाना खादाँ यसको मुल्य होइन, मात्रालाई ध्यान दिने गर्नहोस् । खाद्य सामाग्रि किन्नु अघि लेखेर लिष्ट बनाएर किन्ने गर्नु होस् । छिटो बिग्रने सामाग्री चाहिदो मात्रामा किन्ने बानि बसाउनु होस् । चामल, पिठो लगायतका सुख्खा सामाग्री हावा लिक नहुने डब्बा वा बोरामा राख्नुहोस् । फलफुल, हरीयो साग, तरकारी, माछामासु प्रयोग नहुने अवस्थामा फ्रिजमा राख्नुहोस् ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार विश्वमा खाद्य उत्पादनको समस्या भन्दा खाद्य सामाग्री नष्ट वा फ्याकिने समस्याका कारण यसको अभाव हुने गरेको जनाएको छ । नेपालका होटल, पार्टि प्यालेस, भोजभत्तेर लगायतमा नष्ट हुने खाद्य सामाग्रीको बचत हुने हो भने धेरै नेपालीले भोकै सुत्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ । त्यसो भए आजबाट तपाई खाना फ्याक्ने बानीमा सुधार गर्नुहुन्छ त ? कोशिस गर्नुस् किनकी तपाईले खाना नफ्याक्दा त्यसले अरु कसैको पेट भर्न सक्छ ।